Sidaas waxa tafaariiqle ah inay sameeyaan?
Marka aad eegto category uumiga oo dhan, waxay si guul ah kusoo bixiyeen nicotine la iidaan, oo CBD bixisaa maroojin caafimaad oo cusub. Waa wax macaamilka waa cajiib ah oo ku saabsan, iyo mar ay u isku dayay, inay u badan tahay in ay ogaadaan in ay bixisaa qaar ka mid ah faa'iidooyinka. Taasi waa fiican yahay qof walba.
"Waan ogahay in dad badan oo kuwaas vape doonaya in ay isku dayaan CBD .. waa arrin aan la aqoon, ayaa sheegay Anthony Bautista, CEO of daahir ah CBD Uumiga. "Waxaan qabaa CBD halkan waa in ay sii joogaan, waayo muddo dheer aad. Marka aad bilowdo caawinta dadka qaba xanuunnada ay, haddii ay tahay hurdo ama walaaca, ay u noqdaan macaamiisha u ah nolosha.
CANNAPRESSO CBD E 1000mg dareere ah oo saliid lagu CBD 10ml vape
CANNAPRESSO CBD E 500mg dareere ah oo saliid lagu CBD 10ml vape
CANNAPRESSO CBD E 300mg dareere ah oo saliid lagu CBD 10ml vape
CANNAPRESSO CBD E dareere-300mg saliid vape 30ml CBD
CANNAPRESSO CBD E dareere-100mg saliid vape 30ml CBD